लेखनाथको बजेट साढे २६ करोड ४० लाख, कहाँ के-कति खर्छ होला ? -
लेखनाथको बजेट साढे २६ करोड ४० लाख, कहाँ के-कति खर्छ होला ?
सात तालको बगैंचा शहर लेखनाथको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २६ करोड ४० लाख ५२ हजारको योजना तर्जुमा भएको छ । यो बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ करोड ८८ लाख ३२ हजारले बढी हो । अघिल्लो वर्ष लेखनाथ नगरपालिकाको बजेट २१ करोड ५२ लाख २० हजार थियो ।
लेखनाथ नगरपालिकाको २४ औं नगर परिषदले गरेका निर्णय सार्बजनिकीकरण गर्न सोमबार आयोजित कार्यक्रममा लेखनाथ नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत नवराज ढुंगानाले बजेटमा कुल आन्तरिक श्रोततर्फ ४ करोड ६६ लाख ८२ हजार अर्थात कुल बजेटको १७.६८ प्रतिशत र वाहृय श्रोततर्फ २१ करोड ७३ लाख ७० हजार अर्थात ८२.३२ प्रतिशत अनुमान गरिएको जानकारी दिए । अनुमानित श्रोत चालु वर्षको तुलनामा आन्तरिक तर्फ ३७.८८ प्रतिशत र बाहृयतर्फ १६.७३ प्रतिशतले बढी हो ।
आन्तरिक श्रोततर्फ स्थानिय करबाट १ करोड ९८ लाख ८० हजार, सेवा शुल्कबाट १५ लाख ४० हजार, दस्तुरबाट २ करोड ३९ लाख ५० हजार, बिक्रीबाट ६ लाख र अन्य आयबाट ७ लाख १२ हजार अनुमान गरिएको छ ।
बाहृयतर्फ नेपाल सरकारबाट प्राप्त सशर्त र निःशर्त दुबैबाट १५ करोड ४५ लाख २० हजार, राजस्व बाँडफाँड तथा रजिष्टे्रसन दस्तुरबाट २ करोड ४० लाख, अन्य निकायबाट १ करोड ३८ लाख ५० हजार, लागत सहभागिताबाट २ करोड ५० लाख अनुमान गरिएको कार्यकारी अधिकृत नवराज ढुंगानाले बताए ।
लेखनाथ नगरपालिकाले आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा पूर्वाधार तथा संरचना विकासमा ८ करोड, ८८ लाख ९६ हजार अर्थात कुल बजेटको ३३.६७ प्रतिशत छुट्याएको छ । कृषि, वन तथा वातावरणमा ५५ लाख ४१ हजार अर्थात २.१० प्रतिशत मात्रै छुट्याइएको छ । कृषि, वन तथा वातावरणका लागि छुट्याइएको बजेट अघिल्लो वर्षको भन्दा ७९ लाख ९ हजारले कमी हो ।
त्यस्तै, जनसंख्या तथा सामाजिक कामका लागि ८ करोड १८ लाख १२ हजार अर्थात ४३.०३ प्रतिशत छुट्याइएको छ । संगठन तथा प्रशासनमा ३ करोड ८० लाख ८६ हजार अर्थात १९.२५ प्रतिशत छुट्याइएको छ भने जलश्रोत तथा भूमीमा ५१ लाख रुपैयाँ अर्थात १.९५ प्रतिशत छुट्याइएको छ ।
बजेटमा नगरको वडा विकासका लागि प्रति वडा ७ लाखका दरले १८ वटा वडाका लागि १ करोड २६ लाख बिनियोजन गरिएको छ । सडक स्तरोन्नती र मर्मत सम्भारका लागि १ करोड ४९ लाख ८२ हजार छुट्याइएको छ । सहरी पूर्वाधार योजनाका लागि १ करोड ८१ लाख ७ हजार, नगरको वातावरण तथा सरसफाई र हरियाली कार्यक्रमका लागि १७ लाख बिनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, अतिक्रमित जग्गा संरक्षणका लागि २० लाख छुट्याइएको छ । बेगनाससहित ७ तालमा पर्यटन प्रबर्द्धनका लागि ७ लाख बिनियोजन गरिएको छ ।
वालमैत्री नगर घोषणा गर्ने योजनासहित लेखनाथ नगरपालिकाले त्यसको तयारीका लागि ८१ लाख ८ हजार १ सय बिनियोजन गरिएको छ । जनजातीहरुको भाषा, संस्कृति तथा संरक्षणका लागि २० लाख २७ हजार, दलित समुदायको उत्थान, सिप विकासका लागि १२ लाख १६ हजार, अपाङ तथा फरक क्षमता भएकाहरुका लागि आयआर्जन, सिप विकास, क्षमता अभिबृद्धिलगायतका लागि ८ लाख १० हजार, महिलाको सिप विकास, क्षमता अभिबृद्धि, संस्थागत विकासका लागि ५४ लाख ६ हजार, जेष्ठ नागरिकहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि ८ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
लेखनाथ नगरपालिकाले पोखरा उपत्यकाको समग्र विकासका लागि ३० लाख छुट्याएको छ । यसैगरी गरिबी न्यूनिकरण तथा गाउँ नगर साझेदारी कार्यक्रमका लागि १ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।